FMI – Fec 310 tapitrisa dolara : miankina amin’ny filankevi-pitantanana ny hahazoana izany | NewsMada
Nifarana, omaly, ny dian’ireo delagasiona avy amin’ny FMI, nanomboka ny 25 mey. Nijery ireo tetikasa azo anohanana ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo hatramin’ny taona 2019 sy nifanakalo hevitra momba izany tamin’ny mpitondra. Hatramin’ny faran’ny volana jolay handinihan’ny filankevi-pitantanan’ny FMI izay haroson’i Madagasikara hahazoana io Fec io.
Neken’ireo delegasiona avy amin’ny FMI notarihin’i Mills ny hahazoan’i Madagasikara ilay famatsiam-bola Facilité élargie de crédit (Fec). Nilaza ny avy ao amin’ny FMI ny amin’ny tokony hanohanana fandaharanasa ara-toekarena hatramin’ny 2019, hisian’ny fisondrotan’ny harinkarena. Hahazoana famatsiam-bola 310 tapitrisa dolara izany, mbola mila fankatoavan’ny filankevi-pitantanana any aminy. Tsy maintsy hita ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana, antoka hahamora ny fahazoana izany famatsiam-bola izany.
Fepetra lehibe takin’ny mpamatsy vola, ny fanatsarana ny fidiram-bolam-panjakana sy ny fandanjalanjana ny fandaniana. Tanjona ny hampitomboana ny fidiram-bolam-panjakana. Ankoatra ny fampanarahan-dalàna ireo any amin’ny sehatra tsy ara-dalàna, tokony hahitana fahombiazana ny asan’ny sampandraharahan’ny hetra sy ny fandintseranana. Tokony any amin’izay hita fa hitondra fampandrosoana tokoa ny fandaniana. Arahi-maso ny ezaka ataon’ny fanjakana amin’ny fandaniana any amin’ny fananganana fotodrafitrasa. Ireo rehetra ireo, mitaky fanatsarana ny fitantanam-bolam-bahoaka.
Jirama sy Air Madagascar
Efa ao anatiny ary tokony hotazonina hatrany ny fampiharana ny tena vidin-tsolika sy ny fanafoanana miandalana ny fanampiana any amin’ireo orinasam-panjakana ahitana fatiantoka. Sorohina ny tsy hisian’ny trosa vaovao ary ezahina efaina izay tany taloha. Andrasan’ny FMI ny fahaizan’ny fanjakana manarina ny Jirama sy ny Air Madagascar ary nasian-teny manokana ny ady amin’ny kolikoly sy ny fahaleovantenan’ny Bianco.
Nomarihin’izy ireo ny volam-panjakana, izay mila ezaka lehibe. Tokony hihoatra ny 4 % ny fitombon’ny harinkarena faobe amin ‘ity taona ity, ary misy ireo sehatra tokony hahazoan’ny Banky foibe mampitombo ny tahirim-bola vahiny ao aminy. Tokony tsy ho hita taratra ireo singa manambara ny fitotongan’ny toekarena. Mitaky ezaka lehibe ireo rehetra ireo fa tsy vitan’ny resaka ambony latabatra.